DHAGEYSO: Xiisad ka dhalatay xil ka qaadistii Guddoomiye Dhoobo daareed & dagaal ka dhacay Boosaaso | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA DHAGEYSO: Xiisad ka dhalatay xil ka qaadistii Guddoomiye Dhoobo daareed & dagaal...
DHAGEYSO: Xiisad ka dhalatay xil ka qaadistii Guddoomiye Dhoobo daareed & dagaal ka dhacay Boosaaso
Waxaa sii xoogeysanaya xiisadda ka dhalatay xil ka qaadistii maalin ka hor lagu sameeyay Guddoomiyihii Baarlamaanka Puntland C/xakiim Maxamed Axmed Dhoobo daareed,kaas oo ka taagan deegaano ka tirsan Puntland.
Arrintaan ayaa waxaa ka hadlay Culimada, Waxgarad iyo Shacabka reer Puntland kuwaas oo ku baaqay in xaaladda la dejiyo wax walbana miiska wada hadalka lagu dhammeeyo iyo sida ugu haboon.
Shacab weynaha ku dhaqan deegaanada Puntland ayaa ka hadlay xilka qaadistii Dhoobo, waxaana ay ayaan daro ku tilmaameen sifaha loo maray xilka qaadistiisii.
Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayey ku eedeeyeen in ay yihiin kuwo aanan u adeegin shacabka Puntland isla markaasna xili walba ay ridaan gudoomiye walba oo soo mara Baarlamaanka iyaga oo qaadanaya lacago laaluush ah.
Sidoo kale waxa ay xad gudub ku tilmaameen in xilka laga qaado gudoomiyaha isaga oo aanan kasoo hor muuqan xildhibaanada Baarlamaanka waxna laga waydiin eedaymaha looga qaaday xilka.
Guddoomiyihii Baarlamaanka ee xilka laga qaaday iyo gaadiid dagaal oo wehlinaya ayaa gaaray deegaanka uu ka soo jeedo ee Xingalool gobolka Sanaad,isagoo la kulmay Waxgaradka deegaanka kalana hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee Puntland.